Ikhebula le-Cable Resin Kit
Ezi zihlanganisi ze-Resin Cable ze-in-line zenzelwe phantsi komhlaba, ngaphezulu komhlaba okanye izicelo zokudibanisa ikhebula ngaphantsi kwamanzi. SENTUO amalunga ekhebula alungele ukudityaniswa ngokuthe ngqo kweentambo ze-polymeric, izixhobo ezixineneyo zobhedu, kunye nezihlanganisi ezomeleleyo. Amalungu edibaniselwano abonisa ukungunda ngenaliti, iigobolondo ze-torpedo ezinoyilo lwe-snap-lock ..
Ubume bokwakhiwa kwetonela kunye nofakelo lwentambo luyinkimbinkimbi lufuna imveliso ekhethekileyo. Uyilo olufanelekileyo lofakelo kunye nokudityaniswa kwentambo kwemveliso kwenza kube lula ngakumbi ukufaka nokusebenza.
Oku kufanelekile kumgca ophambili ongaphantsi kwe-30mm, umgca wesebe ungaphantsi kwe-25mm.
Ibhokisi yeplastiki engena manzi
Yenziwe ngezinto ezinjenge-ABS kunye nePC, njl. Umzimba odibeneyo kunye nekhava zilungiswe ngezikere ezine zeplastiki ekunzima ukuziwela. Ukucaciswa kunye nobungakanani bayo bunokuyilwa ngokusekwe kwiimfuno zabathengi. Ezoqoqosho kwaye ezifikelelekayo. Ngu-1/4 kuphela ubunzima bebhokisi yentsimbi, ukuququzelela ukuphathwa kunye nokusebenza, akukho mhlwa, ukuxhoma okulula.
Le yibhokisi yokuhanjiswa kweklasikhi.
Isetyenziswa ngokubanzi kuthungelwano olusezantsi lwamandla ombane abonelela abathengi kunye nezakhiwo zorhwebo.